Ihe omuma ihe omuma esi eme ka ndi oru ahia di iche iche na SEO di nkpa
Ịzụ ahịa ọdịnaya na search engine optimization strategies are tightlyejikọtara ha na mgbe ha jikọtara ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ha dị mma karịa PB & J. Uzo abuo a bu inye ndi mmadu ihe ha choro.Iji nweta ọdịnaya gị site na atụmanya, ịkwesịrị ịchọta engines ọchụchọ.
Frank Abagnale, Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ nke Ọkachamara Digital Servies kọwara otú e si arụ ọrụ abụọ a, na-ekerịta ihe ọmụma dị mkpa nke ibe weebụ nke kwesịrị ịdịkachasị maka ma ụmụ mmadụ ma search engines.
Nweta isiokwu ndị kwesịrị ekwesị
Ntak mere ị na-eme nke a maka engines ọchụchọ: Keywords bụ atụmatụ bụ isimee ka a chọta akwukwo gị. Ndị ọkachamara Smart SEO nyochaa ọ bụghị naanị okwu ụlọ ọrụ ha chọrọ ịkwado maka, kamakwa okwu na ahịrịokwuna ndị na-ekiri ha nwere ike iji chọpụta ha. Smarter SEO na-eme ka ozi ha dị na mkpirikpi nke okwu atọ ma ọ bụ karịaejikọtaghị na ọrụ gị ma ọ bụ ngwaahịa. Nke a na - ebelata mpi na ahia n'ụzọ dị otú a, na - eme ka ọ dịrị ha mfe ịkwado ha.
Gini mere ị na-eme nke a maka ndị mmadụ: Ogologo ọchụchọ ọchụchọ dị ogologo nwere ọdịdịgbanwee ghọọ ndu na ahịa nke ọma. Iji kụrụ ahịa ahịa ahịa, ị ga-achọ ọtụtụ isiokwu dị ogologo ọdụ ogologo ma mee ka ha dị elu.
Nweta aha aha ya na nkọwa mkpado atọ
Ntak ị mere nke a maka engines ọchụchọ: Nkọwa ndị a adịghị kadị mkpa dị ka ha na-emebu ogo kama ọ nwere ike ịmetụta n'ụzọ ị ga-esi emetụta ọkwá gị. Edere aha na nkowa di elu kariaNdị nchọpụta "dị ịrịba ama" nke na-ahọrọ na ndepụta gị ebe a na-egosipụta àgwà. Nke a na - ebute ndepụta na - agagharị na ọkwa.
Ntak mere ị na-eme nke a maka ndị mmadụ: Ndị a bụ naanị ozindị mmadụ na-achọ na ụdị nke ndepụta. Nkọwa nke na-anọchite anya ọdịnaya dị na ibe gị, nke ahụ na-ekwuna njirimara ọchụchọ nke onye ọrụ, bụ oku na-eme ka ndị mmadụ gbadaa na ibe gị. N'ụzọ dị otú a, ị na-adọta ndị ọbịa dị mkpa bụ ndị maaranke ihe ị ga - atụ anya n'aka gị.
Iji isiokwu na ọdịiche ha dị na akụkụ nke ederede ahụna na mkpado osisi dị elu, otu ugboro ma ọ bụ okpukpu abụọ na ndepụta okwu
Ntak ị mere nke a maka engines ọchụchọ: Ntị nke engines ọchụchọgbanwere na mkpado nkụnye eji isi mee. Mee maka ọrụ a site na ịtinye mkpụrụokwu na-enweghị isi na gụnyere ọdịiche dị n'ime ha. Ọ bụ ihe gbasara ijinke okwu a jikọtara ọnụ.
Gini mere i ji mee nke a maka ndi mmadu: Ndi mmadu nwere mmetuta nke nyochasite n'ịntanetị karịa ịgụ ihe. Ndị isi isiokwu dị mma iji nyochaa ma nwee ike ịdọta ndị mmadụ ịgụ otu ibe site na ime ka ọ dịkwuo mfe ịgụ.
Tinyere ihe niile a kpọtụrụ aha n'elu, ọdịnaya kwesịrị ịdị na-adọrọ adọrọna-adọta ma na-elekọta ndị ọbịa. Ihe ọmụma kwesịrị ịdị mfe ịchọpụta ma ọ bụghị ya abaghị uru. Ma SEO na Marketing Njikwakwesịrị ịrụ ọrụ na njikọ, ebe ọ bụ na mmadụ enweghị ike ịgụ ihe, usoro SEO ga-ewere dị ka naanị spam. Ya mere na-eke aọdịnaya dị mma ịgụ na ịkekọrịta bụ ihe bụ isi ebumnobi ị ga-elekwasị anya Source .